Barnaamijka Bandhigga Soomaalida ee Ifraax Axmed: Sheekooyin ka yimid Tahriib - Telling the Real Story
Barnaamijka Bandhigga Soomaalida ee Ifraax Axmed: Sheekooyin ka yimid Tahriib
La wadaag tan:
Wax la mid ah may kugu dhacdey?
The Telling the Real Story (TRS) waxey soo qabanqaabiyeen seddex bandhig oo wadahadal ah oo lala yeeshay qaxootiga Soomaalida iyo magangalyo doonka ee Qaahira si looga wada hadlo tahriibka. Kaqeybgalayaasha, rag iyo dumarba, waxay aad urajeynayeen inay la wadaagaan waaya aragnimadooda ayna ku taageeraan jaaliyadaha Soomaaliyeed dadaalada lagu soo bandhigayo halista iyo dhibaatooyinka tahriib.
Kani waa kii ugu horreeyay ee taxane ah seddex barnamij oo lala gabtay Ifraax Axmed. Mawduucyada looga hadlay fiidiyowgaan waxaa ka mid ah xaaladaha foosha xun ee dadka ay la kulmaan markay ku socdaan tahriib iyo waajibaadka kuwa ka badbaaday inay dadka kale u sheegaan khataraha.
Qeybti 2ad: Nakhlan
Nakhlan waa qaxooti Soomaaliyeed oo da 'yar oo hadda ku nool Masar. Wuxuu ku dhashay qaxooti Yemen. Wuxuu yimid Masar isagoo qoyskiisa la socda, mana haysan wax taageero ah, sidaa darteed Nakhlan wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo bakhaarro gawaarida qaada. Waqtigiisa firaaqada ah, wuxuu bartay sawir qaadista iyo tifatirka muuqaalka. Maanta, wuxuu noqday shaqsi warbaahinta bulshada leh oo leh in kabadan hal milyan oo taageerayaal ah oo fiidiyowyadiisa ka daawanaya Youtube iyo chanaalo kale.
Qeybti 3ad: Aasiya
Aasiya waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho, Soomaaliya. Markii ay weynaatay, waxay dooneysay inay wax barto oo journalist noqoto, laakiin markii walaalkeed ay soo weerareen al-Shabaab waa inay guriga joogtaa nabadgelyo darteed. Waxay wali rabtay inay himilooyinkeeda gaadho oo waxay go’aansatay inay ka cararto Soomaaliya oo ay Yurub ugaga sii gudubto Masar. Waxay u aadday Kenya, iyadoo u sheegtay waalidkeed inay u tagtay halkaas si ay u sii wadato waxbarashadeeda. Magaalada Nayroobi, waxay la xiriirtay nin wax tahriibiya, waxaana loo qaaday dalka Uganda isagoo ku dhuumaaleysanaya bas yar oo halkaasna loo aado dhinaca Juba, South Sudan. Halkaas, oo ay la wadaageen gabar kale, Aasiya waxay kala lahadashey tahriibiye si ay u geeyaan Khartoum.
Qeybti 4ad: Somali wada Hadal
Kani waa kii qaybtii labaad ee taxane ah seddex barnamij oo lala gabtay Ifraax Axmed. Mawduucyada looga hadlay fiidiyowgaan waxaa ka mid ah xaaladaha foosha xun ee dadka ay la kulmaan markay ku socdaan tahriib iyo waajibaadka kuwa ka badbaaday inay dadka kale u sheegaan khataraha.
Qeybti 5ad: Khadar
Khadar wuxuu ku koray magaalo yar oo Soomaaliya ah. Wuxuu xiiseyn jiray Fashion wuxuuna ku riyoonayay inuu aado dibada si uu u gaaro himilooyinkiisa. Qaar ka mid ah asxaabtiisa waxay aadeen Yurub waxayna ku dhajin jireen sheekooyin wanaagsan warbaahinta bulshada kuna saabsan noloshooda halkaas. Khadar wuxuu go’aansaday inuu isku dayo inuu u safro Yurub. Wuxuu la xiriiray nin wax tahriibiya wuxuuna u sii gudbay dhanka Ethiopia ilaa Suudaan, halkaas oo isaga iyo dadkii la safnaa ay ku xirnaayeen xero tahriibiyeyaal. Waxay ku qasbanaadeen inay halkaas sii joogaan muddo bil ah xaalado aad u xun.
Qeybti 6ad: Abubakar
Mohamed Abubakar wuxuu ku koray magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Iskuulka wuxuu bilaabay inuu ciyaaro kubada cagta markii dambena wuxuu ku biiray mid ka mid ah kooxaha heerka qaran. Ka dib waa la qabtay oo lagu eedeeyay inuu xubin ka yahay kooxda Al-Shabaab. Qoyskiisu waxay ku guuleysteen inay xabsiga ka soo saaraan, wuxuuna go’aansaday inuu ka baxo Soomaaliya maxaa yeelay nabad kuma dareemayo halkaas.
Qeybti 7ad: Somali wada Hadal
Kani waa qaybtii sedexaad ee taxane ah seddex barnamij oo lala gabtay Ifraax Axmed. Mawduucyada looga hadlay fiidiyowgaan waxaa ka mid ah xaaladaha foosha xun ee dadka ay la kulmaan markay ku socdaan tahriib iyo waajibaadka kuwa ka badbaaday inay dadka kale u sheegaan khataraha.
Qeybti 8ad: Deeq
Muqdisho, Soomaaliya, Deeq wuxuu qabaneyay shaqo farshaxan. Wuxuu agaasime ka ahaa aflaanta gaagaaban iyo riwaayadaha sidoo kale wuxuu ahaa gabayo. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu helay wicitaan taleefan oo hanjabaad ah oo uga digaya inuu joojiyo hawshan ama la dilo. Uma uusan hanjabin laakiin bil kadib ayaa la toogtay markii uu fadhiyay maqaaxi uu adeerkiis la joogo. Rasaasta ayaa ku dhacday inaadeerkiisii ​​la dilay.